Zita raMwari Ndiani? | Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Ndebele Ndonga Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Mumwe nemumwe ari mumhuri dzedu ane zita rake. Kunyange mhuka dzatinochengeta pamba dzine mazita! Hazvina musoro here kuti Mwari avewo nezita rake? MuBhaibheri, Mwari ane mazita akawanda okuremekedza akadai seokuti, Mwari Wemasimbaose, Changamire Ishe, uye Musiki, asi anewo zita rake pachake.—Verenga Isaya 42:8.
Shanduro dzakawanda dzeBhaibheri dzine zita raMwari pana Pisarema 83:18. Somuenzaniso, muShanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene, ndima yacho inoti: “Imi, mune zita rokuti Jehovha, imi moga ndimi Wokumusorosoro kumusoro kwenyika yose.”
Mwari anoda kuti tishandise zita rake. Tinoshandisa mazita patinotaura nevaya vatinoda vakadai seshamwari dzepedyo. Hatifaniri kudarowo here kana tava kutaura naMwari? Jesu Kristu akatikurudzirawo kushandisa zita raMwari.—Verenga Mateu 6:9; Johani 17:26.
Zvisinei, kuti tive shamwari dzaMwari, hatifaniri kungoziva zita rake chete asi tinofanira kuziva zvakawanda nezvake. Somuenzaniso, Mwari akamboita sei? Zvinoita here kuti tiswedere pedyo naMwari? Unogona kuwana mhinduro dzemibvunzo iyoyo muBhaibheri.
Unofunga kuti Mwari anokuda here? Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti Mwari ane unhu hwakaita sei uye zvaungaita kuti uve pedyo naye.